“ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို.တွင်ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား များ၏ အကြမ်း ဖက် လုပ် ရပ် များ အ တွက် ရခိုင် ပါတီ ဗဟိုကော် မတီ ဝင် တစ် ဦး စစ်ဆေး ခံနေ ရ..” | Burma Muslim
“ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို.တွင်ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား များ၏ အကြမ်း ဖက် လုပ် ရပ် များ အ တွက် ရခိုင် ပါတီ ဗဟိုကော် မတီ ဝင် တစ် ဦး စစ်ဆေး ခံနေ ရ..”
By burmamuslim on April 3, 2014
စစ်တွေမြို.တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ ဆောင်ရွက်မပေးနိုင်သော ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး တို့အတွက်စောင့်ရှောက်မှုများ၊အကူအညီများပေးနေသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ. အစည်းများ၏ရုံးခန်းများ၊နေအီမ်များနှင့် ဂိုဒေါင်များအား ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီး လုယက်မှုများအတွက် အကြမ်းဖက်ရခိုင်လူမျိုး (၁၂)ယောက်အား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပြီး ၎င်းတို့အထဲတွင် ရခိုင် အမျိုးသားပါတီ(ANP) နှင့် ယခင်ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ် ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးမောင်သိန်း လည်းပါဝင်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများသည် ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုထဲတွင် အကူအညီပေးနေသောအဖွဲ.များမဟုတ်ပါ။တစ်ခြားသော အကူအညီလိုအပ်သော ပြည်နယ်၊တိုင်း များတွင်ပါ အကူအညီများပေးနေသော အဖွဲ.အစည်းများဖြစ်ပြီး တစ်ခြားနေ ရာ များတွင် ထိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ.အစည်းများနှင့်ပက်သက်၍ ဘာမှပြဿနာဖြစ်သည်ကိုမကြားကြရပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းတွင်သာ ထိုအဖွဲ.အစည်းများက ဘက်လိုက်မှုရှိသည် ဆိုသော ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများ၏ စွတ်စွဲမှုခံရနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဤအချက်မှာ စဉ်းစားစရာကောင်းလှပါသည်။ဖမ်းဆီးထားသောသူများကို စစ်တွေထောင်တွင် ထိန်းသီမ်း ထားပါ သည်။ ထိုရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများသည် စစ်တွေမြို.ပေါ်ရှိ UN အပါအဝင် အိုင်အင်န်ဂျီအို အဖွဲ. ၃၀ ခန့်ကို အကြမ်းဖက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
..ကိုးကားသတင်း ဆဲဗင်းဒေး သတင်းစာ.